Photos: Pyay Ti Oo + Eaindra Offer Meals to Monks @ Maha Si Monastery | Myanmar Celebrity Couple Photos
Photos: Pyay Ti Oo + Eaindra Offer Meals to Monks @ Maha Si Monastery
Here are some photos of Myanmar famous Actors; Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin's Ceremony of Offering Meals to the monks and nuns to bless their marriage which was held on today morning (15 January 2011) at Maha Si Monastery, Yangon. Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin will hold the Ceremony of Binding the hands of the Bride and Groom as the way of Myanmar traditional marriage style on 16 January 2011 at Sedona Hotel, Yangon.
ပြေတီဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံ နဲ့ နှစ်ဘက်သော မိဘများ တရားနာယူနေစဉ်
အလှူငွေတွေ ပေးအပ်နေတဲ့ ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ရဲအောင် နှင့် ပြေတီဦး တို့ စုံတွဲ
မေသင်ဇာဦး တို့ စုံတွဲကို နှုတ်ဆက်နေတဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မင်္ဂလာဦး အလှူပစ္စည်းများ ကပ်လှူနေတဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်နေတဲ့ ပြေတီဦး
မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးပြီးနောက် ကြင်စဦး မောင်နှံ
စာနယ်ဇင်းသမားများ နဲ့ အတူ
ရဲအောင် ၊ နေရဲမာန် တို့နှင့် အတူ
တီတီ က ၀ဲဝဲ ကို ကြင်ကြင်နာနာ ၀ဲဝဲကလည်း တီတီ ကို ကြင်ကြင်နာနာ
ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအတွက် နှစ်ယောက်အတူ ရေစက်ချနေတဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ဒီကနေ့ (ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်) မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပွဲမှ ဓာတ်ပုံများ
beckhamnJanuary 21, 2011 at 7:54 AMဘယ်တော့ကွဲကြဦးမလဲမသိဘူးReplyDeleteMg KyawApril 8, 2011 at 10:46 AMဟုတ်ပ....ဝဲထဲ ကျ သွားတဲ့ တီကောင် အတိုင်းပဲ။။။အမြုပ် ပဲ။ဟဲဟဲReplyDeletepzkJuly 27, 2011 at 4:50 AMမိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ...သူများကို မနာလိုဖြစ်နေကြတယ်...ReplyDeleteReplieshiro24May 16, 2012 at 7:32 PMစပွန်စာရတိုင်းအလကားဆောင်တယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါ။အကျိုအမြတ်မရဘဲရိုက်ကွင်းအပျက်ခံအချိန်ကုန်ခံပြီးပွဲမလုပ်ပါ။အထူးသဖြင့်မင်းသားရဲ့မိဘအသိုင်းအဝိုင်းပေါ့။ဆရာဝန်အသိုင်းအဝိုင်းမကင်ရာမကင်းကြောင်းလာကြမယ်လေ။ဒီတော့မြတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်လေ။ဒီယုန်မြင်လို့ဒီချုံထွင်တဲ့ပွဲပါ။စဉ်းစားကြည့်ရင်တကယ်တသက်မှာတခါဆိုတဲ့ရှေးထုံးလည်းမညီပါဘူး။ဒီလောက်ပွဲများကိုလာတဲ့ပရိတ်သတ်တွေမှာကုန်သွားတဲ့အချိန်အဝတ်အစားဖိုးအရမ်းအားနာစရာပါ။တကယ်တော့ကိုယ့်ရာထူးကျော်ကြားမှုကိုအသုံးချတဲ့"ဘယ်သူသေသေငတေမာရင်ပြီးရော"ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ပွဲကြီးပါ။DeleteReplyAdd commentLoad more...